भ्यागुताको धार्नी कि पूर्वपञ्च एकता ?
काठमाडौं । गुट र फुट, फुट र एकता, एकतापछि फुट, राप्रपाको इतिहास यही हो । चौथो शक्तिबाट जनाधारबिहीन रुपमा झरिसक्दा पनि एकताको महत्वभन्दा चुनाव चिन्हमा रुमल्लिरहेका पूर्वपञ्चहरु फेरि एकता गर्ने गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यद्यपि एकादोस्राप्रति शंकाभाव र शक्तिको बाँडफाँड हुनुपर्ने विषय हटेको छैन । भन्नलाई हलो कि गाई चिन्ह भन्ने विवाद देखिए पनि यथार्थमा शक्तिमा साझेदारी र थापाको एकाधिकार नै एकताको बाधक बिबाद रहेको बताइन्छ ।
पशुपति शमशेर जबरा र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी दुबै जना कमल थापासँग अलग भएकै शक्तिको बाँडफाँड नमिलेर हो । यही विषयमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजनीतिमा लाग्दिन भनेर आराम गरिरहेका छन् । यद्यपि उनका छोरा जयन्त चन्द राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
अव हेर्नुछ, पूर्वपञ्चहरको बुद्धिको बिर्को खुलेको हो कि होइन ? नमिली राजनीतिमा टिक्न नसकिने र अस्तित्व जोगाउन गाह्रो पर्ने सत्यबोध गरेर पूर्वपञ्हरु मिल्न सके भने आगामी चुनावसम्मको मेहनतले शक्तिशाली बन्न नसक्ने भन्ने छैन । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले समेत सत्तामा जानु गल्ती भएको स्वीकार गरिसकेका छन् र बाँकी पञ्चहरुले एकता र अस्तित्वलाई महत्व दिए भने शक्ति हासिल गर्न सक्छन् । विश्लेषकहरु भन्छन्– यसपटकको एकता भ्यागुताको धानी नबनोस् ।